မြန်မာနိုင်ငံမှ KBZ Bank အသုံးပြုနေသော သူငယ်ချင်းများ မိတ်ဆွေများအတွက် KBZ Bank APKFree Online Media Malaysia (ALL IN ONE)
» မြန်မာနိုင်ငံမှ KBZ Bank အသုံးပြုနေသော သူငယ်ချင်းများ မိတ်ဆွေများအတွက် KBZ Bank APK
မြန်မာနိုင်ငံမှ KBZ Bank အသုံးပြုနေသော သူငယ်ချင်းများ မိတ်ဆွေများအတွက် KBZ Bank APK
Written By နေဇော် လင်း on Saturday, August 23, 2014 | 1:31:00 AM
မြန်မာနိုင်ငံမှ KBZ Bank အသုံးပြုနေသော သူငယ်ချင်းများ
မိတ်ဆွေများ အတွက် KBZ Bank နဲ့ ပက်သက်ပြီး အသေးစိပ်
ရေးထားတဲ့ KBZ Bank APK ဖြစ်ပါတယ်။ KBZ Bank ကို အသုံးပြုနေပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊ လေ့လာနေသူပဲ ဖြစ်ဖြစ်
ဖုန်းထဲကနေ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ ရှိတဲ့ ဘဏ်ခွဲအားလုံးကို
နေရပ်လိပ်စာ ပါဝင်ပြီး အရမ်းလွယ်ပြီး အဆင်ပြေတဲ့ APK
လေး ဖြစ်ပါတယ်။ KBZ Bank APK ကို မြန်မာ ၊ အင်္ဂလိပ် နှစ်ဘာသာဖြင့်
အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Android အတွက်ရော ၊ Iphone အတွက်ပါ တင်ပေးထားပါတယ်။ လိုအပ်ရင် အောက်ကလိပ်စာကို ဝင်ရောက်ပြီး ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်။ https://app.box.com/s/cvu8d2aty35ctjku2fv2 https://www.firedrive.com/file/9799404035C05482 http://www21.zippyshare.com/v/23139047/file.html Android ဖုန်းများအတွက် ပလေးစတိုးမှာ တိုက်ရိုက် ဒေါင်းရန် - KBZ Bank Android APK https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bit.kbz&hl=en အိုင်ဖုန်း အတွက် ဒေါင်းရန် - KBZ Bank APP
Description KBZ Mobile Application offers youafast and simple way to:-Find out about our services
-Daily Currency Exchange Rates and Calculator
-Locations of ATMs and Branches countrywide -Notification of latest news
Find out about our services: information on all the services KBZ provides
Currency Exchange Rates and Calculator: Find out what the daily exchange rates between the local currency and foreign currency. Calculate the exchange amount that you would like to make with the exchange rate calculator by daily rates.
Locations of ATMs and Branches countrywide: Find the addresses, phone numbers and location on map.
Notification of latest news: KBZ is always providing up to date news.
Interest Calculator: Calculate the interest you will make depending on the amount of cash you want to save up.
Bi-lingual Support: Supports the local language “Myanmar” and English
Offline Map: Lost? Find the locations of the Banks or ATMs using the offline map.
Click to call: Call directly from the app.
နေဇော်လင်း @ Nay Zaw Lin1 Free Online Radio Media (Malaysia News) Free Online Tv Website - www.nayzawlin.com Free Media Website - www.malaysiaonlineradiomedia.com Free 4D Facebook Page - https://www.facebook.com/nayzawlin18 Free Health Facebook Page - https://www.facebook.com/nayzawlin4